SUUQII QUDAARTA UGU WEYNAA GOBOLLADA DHEXE EE MAGAALADA BALADWEYNE OO XIRAN |
SUUQII QUDAARTA UGU WEYNAA GOBOLLADA DHEXE EE MAGAALADA BALADWEYNE OO XIRAN
Baladweyne(GNN)Waxaa xiran guud ahaan suuqii Qudaarta ee ugu weynaa Gobollada dhexe ee magaalada Beledweyne oo ay ceegagaan biyihii ka dhashay fatahaadii dhawaan ku dhufatay magaalada Beledweyne.
Guddoomiyaha Xaafadda Buundo-weyn ee Magaalada Baladweyne oo uu Suuqu ku yaallo, Maxamed Cabdulle Qalaad, ayaa sheegay in Xirnaashaha Suuqa iyo biyaha ku haray intaba ay dhibaato xoog leh ku qabaan dadka deggen Xaafaddaas iyo Ganacsatadii Suuqa Wax ku iibsan jirtay oo sidda uu sheegay hadda ku ganacsada heeraraha wadada laamiga.
”Motooro ayaa hadda biyaha suuqa looga saarayaa, marmarka qaar matoorada lacag la’aan iyo shidaal la’aan ayay shaqadooda u joogsataa, cid gacan nagu siisay illaa hadda ma jirto, marka laga raabo Guddoomiyaha Gobolka oo wax yar -na taray,” ayuu yiri Guddoomiyaha Xaafadda Buundo-weyn.
Suuqan ayaa ahaa Suuqa ugu weyn marka la eego guud ahaaba gobollada dhexe, Waxaana Maalin walba ka bixi jiray tiro Baabuurta Xamuulka Qaada ah, kuwaasoo Khudaarta u kala dhoofin jiray gobolada Waqooyi ee dalka.
Dhinaca kale, waxaa jira sicir barar ku dhacay qiimaha la kala siisto noocyada kala duwan ee Qudaarta, kaddib markii Dalaggii Sanadkan la filayay ay baabi’iyeen dadaadkii dhawaan kasoo Rogmaday Webiga Shabeelle, Taas oo keentay in uu sare u kaco Qiimaha Khudaarta Xilligaan la heli karo.
Guuddoomiyaha xaafadda Buundo-weyn ayaa ugu baaqay maamulka gobolka iyo hay’adda inay Arrintaan wax ka qabtaan, Madaama biyaha iyo Wasaqda xiligan ka dhax taalla Suuqa dhibaato caafimaad ku tahay dadka ku dhaqan xaafadda. ”Cudurro ayaa ka dhashay, Shuban ayaa jira, Kaneeco ayaa jirta, Sidaa daraadeed, Waxaan ugu baaqeynaa mas’uuliyiinta maamulka gobolka iyo hay’adda samafalka in ay arintan wax ka qabtaan” ayuu yiri guddoomiyaha.
Ugu dambeyn, Fatahaadihii dhawaantan ku dhuftay Magaalada Beledweyne – ayaa reebtay saameyn adag oo dhinaca nolasha & deegaanka ah, gaar ahaan marka laga hadlayo dhinaca nadaafada.